IFTIINKACUSUB.COM: Hab-dhaqanka Siyaasada ganacsiga.
Hab-dhaqanka Siyaasada ganacsiga.
Ganacsigu maanta waxa uu u kobcayaa si xawaare ah oo heer sare ah. Sidaas darted waxaad u baahan tahay inaad bixisid oo aad samaysid siyaasadaha saxda ah iyo waraaqaha(decuments) si aad u hubiso in qof kasta oo ku lug leh ganacsiga uu ogyahay waxa laga filaayo oo laga doonaayo. siyaasadaha saxda ah iyo dokumentiyada waxa ay ilaalinayaan oo kuu xifdinayaan ganacsigaaga.
Ma leedahay Siyaasadda gaar ahaaneed? Siyaasadda gaar ahaaneed waa muhiim haddii aad qorshaynaysid inaad xog kazoo aruuriso soo booqayaasha website-ka kanacsigaaga iyo macaamiishaada. Waxaad kaloo fiirin kartaa ganacsiyada kale website-yadooda si ay kaaga caaiyaan inaad samaysato Siyaasadda gaar ahaaneed iyo qaababka loo sameeyo.
Heshiistka aan xirmayn waa dikuminti uu ganacsigaagu u baahanyahay haddii aad qorshaynaysid inaad la shaqaysid kuwa kale, kuwaasoo awood u leh inay helaan xogtaada iyo badeecooyinkaaga kuwaasoo aad rabtid inaan lagaa arag.
Hubi inaad ogtahay meeshaad dhigaysid dikumintigaan. Qorshaha ganacsi ee saxda ahi maku siinaayo jiho oo keliya, laakiin waa mid ka mid ah dikumintayada uu u baahanyahay ganacsigaagu haddii aad rabtid inaad qof ka dhaadhiciso inuu kuu maalgeliyo ganacsigaaga.
Dikumintiga ah qorshaha ganacsiga waa dikuminti aad iyo aad mihiim kuugu ah, waana inaad fahansantahay waxyaalaha ku jira qorshaha ganacsiga iyo sida loo qabto.
6: Siyaasadda akhaalqda